ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၁၄:၄၅MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပါက ၁၅:၃၀MTအချိန်တွင် ဗဟိုဘဏ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။.
ဥရောပဗဟိုဘဏ်၏ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် မူဝါဒအပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဥရောပဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ မာရီယို ဒရာဂီကနေပြီး ယူရိုဇုန်စီးပွားရေးအပေါ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်. စီပွားရေး အခြေအနေ အားကောင်းပါက ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒဖြေလျော့ပေးမည့် အစီအစဉ်များကို လျှော့ချလာနိုင်ပါသည်. သို့သော်လည်း ယခုလောလောဆယ်တွင် ဗဟိုဘဏ်၏ မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေနှင့် ငွေကြေးဖြေလျော့မှု QEအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်နောက်ဆုတ် ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ. ငွေဖောင်းပွမှု ဆက်လက်အားကောင်းလာတာ သေချာသထက် သေချာအောင် စောင့်ကြည့်နေလိုပုံ ရတာဖြစ်ပါသည်. ငွေကြေးမူဝါဒအပေါ် hawkish လေသံမာမှု မရှိနိုင်သော်လည်း Forexထရိတ်ဒါတို့အနေဖြင့် EURကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အတွက် ယခုဆွေးနွေးပွဲကို သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်တာ ဖြစ်ပါသည်.
လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ငွေဖောင်းပွမှုတိုးတက်လာပါက ငွေကြေးဖြေလျော့မှု မူဝါဒအရ အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေများသဖြင့် ယူရိုငွေကြေး တန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်.